Gudoomiyaha Aqalka Sare oo soo dhaweeyay warmutiyeedkii shirkii Dhuusamareeb - Tilmaan Media
Gudoomiyaha Aqalka Sare oo soo dhaweeyay warmutiyeedkii shirkii Dhuusamareeb
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamank Dowladda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay go,aanadii kasoo baxay shirkii ay ku yeesheen Dhuusamareeb madaxda dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay xafiiska gudoomiya ayaa lagu sheegay in shirka go,aanada shirka ay guul hordhac ah u yihiin heshiis ay gaaraan Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa bogaadin iyo hambalyo udiray madaxda iyo shacabka reer mudug sida quruxda badan ee ay u gaasimeen shirka.
Ugu dambayn gudoomiyaha Aqalka Sare wuxuu sheegay in uu rajaynayo in go,aanada shirka Dhuusamareeb ay dalka u horseedaan heshiis keena nabad iyo hormar.
Aqalka sare ayaa kasoo horjeedsaday shaqooyin shuruuc la xiriirta doorashooyinka iyo matalaadda Gobolka Banaadir oo ay ansixiyeen ka Golaha Shacabku. Sidoo kale gudoomiyaha Aqalka Sare wuxuu horay ugu baaqay in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka ee soo socda.